China Silicone Rubber mpempe akwụkwọ N'ihi Solar Laminator emepụta na suppliers | Cayce Mee
Ogo bụ ndụ nke ụlọ ọrụ. Companylọ ọrụ ahụ jikọtara njikwa ngwaahịa dị oke mkpa. Ọ nwere otu ndị ọkachamara na-ahụ maka njikwa njikwa, kwadebere na ụlọ ọrụ ngwaahịa ọkachamara, ụlọ nyocha, na ụlọ nyocha. N'oge usoro mmepụta, ọ na-agbaso usoro tozuru etozu ma na-elekwa obodo na ụlọ ọrụ anya nke ọma. Ardskpụrụ na ụkpụrụ ụlọ ọrụ iji kwado ngwaahịa iji nweta ihe ndị ọrụ chọrọ. Ngwaahịa nke celọ ọrụ Caycemay gụnyere ụdị ọrụ ọ bụla ndị mmadụ mepụtara na mba niile, ụfọdụ ngwaahịa ahụ agaala mba ọzọ ma banye n'ụwa. Ya mmepụta ọnụ ọgụgụ, àgwà, price, nnyefe, na ọrụ meriwo elu otuto si ahịa na-enwe a elu aha.
Ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ na-eji ngwa ahịa dị elu eme ihe, ma na-agbasi mbọ ike igwu ala ma banye na teknụzụ ndị mba ọzọ iji dochie mbubata ma bulie ọnụego mpaghara. E nyela ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ tarpaulin ire ọkụ maka ụgbọ okporo ígwè. Mpempe akwụkwọ Silicone nwere ọkara nke ubi na laminators anyanwụ, iko, osisi, ihe mkpuchi kaadị, wdg; roba akara ihe na petrochemical ụlọ ọrụ nwere a elu aha;
Silicone roba mpempe akwụkwọ maka anyanwụ laminator, Caycemay elu-akwa-eguzogide silicone mpempe akwụkwọ na-eji ụwa a ma ama ika ihe, elu patented technology na pụrụ iche na ngwá nzukọ akara mmepụta, ngwaahịa nwere elu kwụsie ike na ezi pụrụ ịdabere, na a na-eji ọkachamara maka anyanwụ laminators, wdg akụrụngwa
Ngwaahịa a na-ewebata acid-eguzogide ọgwụ, usoro na-eguzogide ọgwụ, ọnọdụ okpomọkụ na-eguzogide gburugburu ebe obibi dị mma na ihe ndị pụrụ iche na ntọala dabere na mbadamba silica gel mbụ. Si otú a, ike mgbali ike, ịdọpụ ike, na nkwụsi ike akụkụ nke efere silicone na-abawanye nke ọma, ndụ ọrụ nke ngwaahịa a na-agbatịkwa oge.
O nwekwara uru na mgbe ejiri mpempe akwụkwọ roba mee ihe na njedebe, ọ gaghị emerụ modulu nke anyanwụ. Oke kachasị obosara nwere ike iru 4000mm na-enweghị akwa.
Ekweghị (Shore A) 60 ± 2
Aringdọ aka ike Mpa≥ 10.5
Anya mmiri gbara N / mm≥ 40
Okpomọkụ na-eguzogide ℃ 200
EVA na-eguzogide ọgwụ (tụnyere) ezi
Nke gara aga: Silicone Rubber fom N'ihi Card-eme Laminator
Osote: Silicone Rubber mpempe akwụkwọ N'ihi Glass Industry
3mm Rubber mpempe akwụkwọ
Amfụfụ Rubber mpempe akwụkwọ
High temp Silicone Rubber mpempe akwụkwọ
Natural Rubber mpempe akwụkwọ
Ume Rubber mpempe akwụkwọ
Silicone Rubber mpempe akwụkwọ
Oké Rubber Sheet